Puntland oo sheegtay in ay heshay Liiska Ganacsatada salka u ah Diidmada lacagta. - Banaadisom
Home Wararka Maanta Puntland oo sheegtay in ay heshay Liiska Ganacsatada salka u ah Diidmada...
Puntland oo sheegtay in ay heshay Liiska Ganacsatada salka u ah Diidmada lacagta.
DG Puntland ayaa amar dul dhigtay shaqsiyaadka diidan socod-siinta lacagta shillin Soomaaliga ah, kadib markii isbadal xooggan uu ku yimid qiimaha sarifka halka doollar oo todobaadyo kahor ahaa 34,000 Sh.so, waxaana haatan lagu sarifayaa halka doollar 50,000 Sh.so.
Isbadalkaas ayaa sababay in Ganacsatada yar yar ay diido qaadashada doollarka, halka ganacsatada waaweyn ka gacma laabteen Shillin Soomaaliga, taasi ayaa dhalisay sicir barar saameeyay qoysaska danta yar.
Madaxweynaha DG Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay Guddiga ku xigeenkiisa Axmed Karaash u xilsaaray soo qiimeynta xalka lagu dejin karo Xiisadda ka dhalatay lacagta ayaa soosaaray amar dhaqangalay 1-da December 2020 oo ah in Canshuurta lagu qaado Doollar.
Go’aankaas ayaa xoojiyay dibadbaxyada rabshada wata, maamulka ayaa ku qasbanaaday in meelaha ugu muhiimsan Magaalooyinka in uu dhigo Ciidamo dheeraad ah si loo kala eryo Dadka cabanaya.
Wasiirka Maaliyadda, Maamullada Gobollada, Degmooyinka ilaa Saraakiisha Booliiska waxa ay si joogta ula hadlaan Warbaahinta, halka arrin ay ka mideysan yihiin ayaa ah in ay tallaabo ka qaadayaan dadka diidan lacagta.
Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud Taliyaha qaybta Booliiska Gobolka Bari ayaa shacabka uga digay diidmada lacagta & sii wadista dibadbaxyada rabshadaha wata oo sababay kacdoon safmar ah dhammaan Gobollada Maamulkaas.
Haddaba, DG Puntland maku guuleysan kartaa socod-siinta lacagta & saldhigidda sarifka oo sabab u ah diidmada? 5fcdf4bc2af02
Previous articleSuldaanka Beesha Daarood oo Farmaajo ugu Baaqay inuu is casilo﻿
Next articleXog: Madaxweyne Farmaajo oo diiday 4 qodob oo ay hor dhigeen bulshada rayidka